Toro-lalana momba ny fividianana fananana any Dubai - Dubai Real Estate nataon'i Provident
Tari-dalana momba ny fividianana trano ao Dubai
Maro ny mandinika rehefa mividy trano any Dubai. Ireto ny torolalantsika momba izay tokony hodinihinareo:
1) Manapaha hevitra eo anelanelan'ny planina na sekoly ambaratonga faharoa
Mitaky trano na trano efa miorina ve ianao? Miaraka amin'ireo mpandraharaha sasany izay manolotra drafitr'am-bola faran'izay tsara amin'ny tetikasa ivelan'ny drafitra; toy ny fandoavam-bola 30% fotsiny ary ny sisa rehefa vita, dia manome fahafahana hividy ho an'ireo izay nalaina tany am-boalohany tamin'ny fividianana planina. Na izany aza ny tsenan'ny tsena dia ahafahan'ny mpividy manofa trano miaraka amin'ny fanombanana 25% fotsiny izay mety ho somary mitombina kokoa ho an'ny sasany. Ny zavatra hafa tokony hoeritreretina dia ny fividianana plan-nao dia mety hampidi-bola be loatra satria ny daty vita ny varotra dia mety miova ary ny mpandraharaha dia mety hampiato ny fananganana sns., Izay mahatonga ny tsena faharoa hahazoana vidiny ambany kokoa. Na eo aza izany, ity risika ambany kokoa ity dia manana karama bebe kokoa, raha toa ka toa lafo kokoa ny tsenan'ny tsena faharoa.
2) Miaraha amin'ny mpandraharaha voarakitra
Rehefa mikaroka fananana iray sy mifampiraharaha amin'ny mpandraharaha iray dia angataho foana izy ireo hampiseho ny nomeraon'ny nomeraon'ny RERA raha vao mihaona. Amin'ny ankapobeny dia hampiseho ny karatra RERA ho porofo izy ireo. Mety ho mendrika ihany koa ny mangataka fanondroana avy amin'ny mpanjifany teo aloha.
3) Manapaha izay fireneny mifanaraka aminao
Rehefa mividy, mila mitadidy ny faharetan'ny fividianana ity ianao. Ao amin'ny 5 taona maro, mety manana fianakaviana ianao; mahatsara ny faritra manodidina ny ankizy? Ny vokatra tsara indrindra dia ny garderie sy ny sekoly akaikikaiky? Eritrereto koa ny fandrosoana maharitra eo amin'ny faritra toy ny toeram-pivarotana, sekoly ary hopitaly. Ohatra, ny fividianana any Dubai Atsimo dia toa toa kely kokoa lavitra noho ireo vondrom-piarahamonina hafa, na dia tsy lavitra ny Expo 2020 aza, ny fampandrosoana ny linitera metro sy ny vondrom-piarahamonina manodidina dia hahatonga azy io ho toerana mafana afaka hiaina ao anatin'ny taona vitsivitsy.
4) Ataovy ny fikarohana nataonao
Tsy ampy ny mijery ny fiarahamonina; Rehefa mividy anao koa ianao dia mila mandinika ny fanorenana manokana na complex izay hividiananao vondrona iray. Moa ve ny mpandrindra nohajaina tsara amin'ny rakitsoratra tsara? Moa ve mitazona tsara ilay trano? Inona avy ireo saram-pandraharahana? Lazao amin'ireo mpifanolo-bodirindrina sy ireo olona hitanao rehefa mijery ilay trano. Izy ireo no loharano tsara indrindra azonao ampiasaina amin'ny tranobe, complexe ary developer.
5) Diniho ny vola rehetrao
Ataovy azo antoka fa miomana amin'ny vola rehetra mifandraika amin'ny hetsika ianao mba hahafahanao manangana teti-bola ho an'ireto. Ny sanda lehibe hodinihina dia:
Fividianana amin'ny tsena faharoa:
Ny saram-pandefasana fandoavam-bidy 4% + AED 540 saram-pandraharahana
DLD fangatahana fisoratana anarana 0.25% ny vola trandrahana + AED 290
Haba avy amin'ny banky 1% amin'ny trosa + VAT
Ny saram-pisoratana anarana AED 2,000 + VAT raha toa ka latsaky ny AED 500,000 ny vidin'ny varotra. AED 4,000 + VAT raha mihoatra ny AED 500,000 ny fivarotana.
Ny saram-pandraharahana 2% ny sanda manan-danja + 5% VAT
Ny saram-pitsaboana momba ny fananana Miankina amin'ny AED 2,500 mankany AED 3,500 + VAT (arakaraka ny vondrona)
Rehefa mividy tsy tapaka, mila mijery ny saram-pandraharahana Oqood ianao, izay 4% amin'ny vidin'ny harena tany am-boalohany ary mandoa mivantana any amin'ny Departemantan'ny Tany Dubai.
Mifandraisa amin'i Anthony Abou-Jaoude
Tetik'asa voarakitra amiko
Hotel trano fandraisam-bahiny SLS Dubai & trano fonenana
Fampandrosoana maharitra ny WOW
Avenue Imperial ao Downtown Dubai
Aprily 27, 2020
Ghalia avy amin'ny DAMAC Properties
Lapan'i Creek ao amin'ny Dubai Harbour by Emaar
Previous PostPrevious Ny UAE no nankasitraka ny firenena safidy indrindra manerantany
Next PostManaraka Ny Dubai Creek Harbor no ho Chinatown Manaraka any Afovoany Atsinanana?
Ny fampiasam-bola any Dubai? Ireo no Tondro-kaody fototra!
UAE: Aiza no ahatongavana ny fiarovana
Fikatsahana: Tetikasa vaovao / fandanjalanjana fiainana
Fiainan'ny vondrom-piarahamonina ao Dubai: Mitovy amin'ny inona izany?
2019 Miakatra isan-taona ny vidin'ny varotra an-tsokosoko ho an'ny mpilalao fototra any Dubai